Minisitry ny Tetibola : «Tsy maintsy miasa ny fadintseranana» -
AccueilSongandinaMinisitry ny Tetibola : «Tsy maintsy miasa ny fadintseranana»
Mbola mitohy ny fitokonan’ny mpiasan’ny fadintseranana ankehitriny. Manoloana izay indrindra anefa, nanambara ary nitondra ny heviny ny minisitry ny Vola sy ny Tetibola, Gervais Rakotoarimanana, fa tsy maintsy miasa ny mpiasan’ny fadintseranana.
Marihina sy araky ny voalaza, fa mitondra fatiantoka goavana, maherin’ny 5 miliara Ar isan’andro ho an’ny firenena sy ny Fanjakana ity fitokonana ataon’ireto sendikan’ny mpiasan’ny fadintseranana ireto ity.
Nanambara ny minisitra fa efa nisy ny baiko amin’ny tsy maintsy hiasan’ny avy eo amin’ny “Cadre A” sy ny “Cadre B” ao amin’ny fadintseranana. “Tsy ireo mpiasa rehetra eo anivon’ny fadintseranana anefa ireo mpikomy manatanteraka fitokonana ireo. Izahay eto amin’ny ministera dia vonona hatrany amin’ny tokony hanatanterahana ny dinika hifanaovana mba hisian’ny marimaritra iraisana. Na izany aza, efa mandray ny andraikitra tandrify azy ny ministera”, hoy ny minisitra.
Manaraka izany, hentitra ny minisitra nilaza fa volam-bahoaka io fa tsy izay tian’ny fadin-tseranana hatrany no tsy maintsy tanterahina eto amin’ny firenena. “Betsaka ireo mpandraharaha no velon-taraina satria mihitsoka ny entana, ny raharaha rehetra tsy mandeha noho ny hafitsoky ny mpiasan’ny fadintseranana. Saingy, misy amin’ireo mpiasan’ny fadin-tseranana ireo anefa no azo resahina sy entanina handeha amin’ny lala-mahitsy ary misy ireo mbola mizizo manatanteraka fikomiana hatrany. Averiko eto hatrany, fa misokatra ny varavaran’ny ministera ary azo atao tsara ny mifampiresaka sy mifampidinika”, hoy hatrany ny minisitra.